अलिकति खर्च गरेमा तालु देखाएर हिँड्नु पर्दैनः डा. रूपक घिमिरे| Corporate Nepal
साउन ७, २०७८ बिहिबार २०:१६
काठमाडौं । राजधानीको मुटु एवं घरानियाले किनमेल गर्ने ठाउँ दरबारमार्गमा हिंडदै गर्दा देखिन्छ ‘आवरण स्किन एण्ड हेयर क्लिनिक ।’ क्लिनिकले ‘हेयर ट्रान्सप्लान्ट’ (कपाल प्रत्यारोपण)मा आफ्नो नाम स्थापित गराउन सफल भएको छ । आफ्नो ब्राण्ड स्थापित गर्न सफल भइसकेको आवरण क्लिनिकले अहिलेसम्म १५ सयभन्दा बढिको हेयर ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेको छ । क्लिनिकका अध्यक्ष डा. रूपक घिमिरे डर्माटोलोजिस्ट हुन् । उनले अतिकति खर्च गरेमा तालु देखाएर हिड्नु नपर्ने दाबी गर्छन् । तर कपाल प्रत्यारोपणको विषय आफैमा लग्जरीसँग सम्बन्धित् रहेकाले यो बाध्यकारीभन्दा पनि ऐच्छिक हुने घिमिरेले बताए । अहिलेको फेसनेवल दुनियाँमा तालु देखाउने कसैको रहर नहुने उदाहरण दिँदै दैनिक दुई जनासम्मको कपाल प्रत्यारोपण गर्ने गरेको अनुभव सुनाए । प्रस्तुत छ डर्माटोलोजिस्ट डा. घिमिरेसँग कर्पोरेट नेपालका नबिन पोखरेलले गरेको कुराकानीः
कति समयमा प्रत्यारोपण गरेको कपाल आउँछ ?
कपाल प्रत्यारोपण गर्दा सानो सानो टुसा एक हप्तामै देखिन थाल्छ । दोस्रो हप्ताबाट दुई महिना कपाल झर्छ । करिब एक वर्षमा सबै कपाल आउँछ । घाममा मोवाइलले फोटो खिचेर तीन महिनामा अर्को फोटो खिचेर हेर्दा आफैले कपाल झरेको थाहा पाउन सकिन्छ । नत्र शनिवार घर बस्दा, बर्ढादा पनि कति कपाल झर्छ थाहा पाउन सकिन्छ ।
साइड इफेक्टको त्रास छ नि ग्राहकमा ?
पार्लर जान साइडइफेक्ट नहुने तर अस्पताल जान हुने भनेको चाहीं अस्पताल र प्रहरीसँग सानैबाट डर देखाइए जस्तै कुरा हो । यसमा एक प्रतिशत केही साइडइफेक्ट हुनसक्छ । यो सामान्य नै हो ।
कपाल प्रत्यारोपण गर्न कतिपटक धाउनु पर्छ ?
यसमा अन्य रोगमा जस्तो फलोअप जरूरी छैन । आफूलाई देखाउन मन लागेमा यही क्लिनिकमा आएर वा भाइबरबाट पनि अपडेट देखाउदा हुन्छ ।
पैसा कमाउदा कपाल झर्छ भन्ने भनाई छ नि । वास्तविकता के हो ?
यस्ता कुरा भनेको एउटा भ्रम मात्र हो । १८–२० वर्षपछि कपाल झर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । यही अवस्थामा भएका बसाईसराई र अन्य घटनालाई दोष दिने गरिन्छ । तर वंशांणुगत कारण, हर्मोन परिवर्तनको कारण तथा अन्य केही कारणले कपाल झर्छ । केटा मान्छेमा नै तालुपनाको समस्या देखिन्छ । यो समस्या महिलामा देखिदैन् । अन्य कारण पनि केही कपाल झर्न सक्छ । तर त्यो चाहीं अर्कै समस्या हो । कतिपय ग्राहकले नेपाल बाहिर गएर पनि कपाल प्रत्यारोपण गराउनु हुन्छ । कपाल प्रत्यारोपण नेपालमा गराए पनि वा बाहिर गराए पनि एउटै हो । तर नेपालमै प्रत्यारोपण गराउँदा बाहिरको भन्दा १० गुणा सस्तो हुन्छ । नेपालमा ५० हजारदेखि दुई लाख रूपियाँसम्ममा कपाल प्रत्यारोपण हुन्छ । अहिले ग्राहकको आर्कषण राम्रै छ । म व्यस्त नै छु ।
कोरोना महामारीको प्रभाव कस्तो पर्यो ?
हामीले कोरोना महामारीको समयमा पनि हामीले ग्राहकसँग जोडिने प्रयास गरिरह्यौ । त्यसले गर्दा हामीलाई धेरै गाह्रो भएन । लकडाउन खुल्ने बित्तिकै हामीले आफ्नो कामलाई सरासर अघि बढाउन सफल भयौं । हामीसँग उपचार गराउनु भएका ९० प्रतिशत ग्राहक हामीसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।
अन्य सुविधा के के दिनु भएको छ ?
हामीले नाम नै आवरण राखेका छौं । आवरणको अर्थ जस्तै हामीले टाउकोको कपालदेखि खुट्टाको नङसम्म प्रत्यारोपण गर्छौं । हामीले यहाँ नाक, आँखा, ओठ बनाउने काम गर्छौं । डन्डिफोर हटाउने, प्रेगनेन्सीको स्केचमार्कहरू हटाउने काम गर्छौं । मोटोपना घटाउने, छालामा हुने समस्या यौन रोग लगायतका बाहिर देखिने तथा गुप्त रोगका समस्याका लागि हामीले सेवा दिइरहेका छौं ।
आम नागरिकमा के–सन्देश छाड्न चाहानु हुन्छ ?
आवरण क्लिनिकमा आउन निकै सहज छ । काठमाडौंकै दरबारमार्गमा रहेकाले यहाँ आउन ग्राहकलाई सहज हुन्छ । ऐतिहासिक नारायणहिटी दरबारबाट चार पाँच घर अगाडि नै हाम्रो क्लिनिक छ,दरबारमार्गको ट्राफिक कार्यालयभन्दा अगाडिपट्टि । सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ । यहाँ आएपछि हामी ग्राहकलाई सकेसम्म गुणस्तरीय सेवा दिने प्रयास गर्छौं । उहाँहरूलाई सन्तुष्ट बनाएर पठाउने छौं ।
थप कुराकानी माथि भिडियोमा हेर्नुहोसः
‘हाम्रो राजनीतिक बेथिति, कर्मचारीको कार्यशैली, स्पष्ट योजनाको अभाव विकासको मुख्य समस्या हो’
'मौद्रिक नीतिको उद्देश्य बजार पनि स्थिर होस, साना लगानीकर्तालाई पनि प्रोत्साहन होस भन्ने हो'
सरकारको कमजोर नीतिका कारण औषधि आयात निरुत्साहित हुन सकेनः शंकर घिमिरे
आईपीओ जारी गर्ने नर्भिक अस्पतालको कस्तो छ योजना ? पाँच बर्षे योजनाअनुसार अघि बढ्दै
साउन २९, २०७८ शुक्रबार
कृषिलाई नछोड्ने अरुलाई जोड्ने नीतिले नै कृषि विकास बैंक अब्बल भएको होः सीईओ उपाध्याय